भर्खर जन्मेको बच्चा बोकेर कोठा छाड्दै, बच्चा जन्मेपछि बाबुले संसार छाडे | यस्तो त कसैलाई नपरोस ।। (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar28media
भर्खर जन्मेको बच्चा बोकेर कोठा छाड्दै, बच्चा जन्मेपछि बाबुले संसार छाडे | यस्तो त कसैलाई नपरोस ।। (भिडियो हेर्नुस्)
July 26, 2021 August 9, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
भर्खर जन्मेको बच्चा बोकेर कोठा छाड्दै, बच्चा जन्मेपछि बाबुले संसार छाडे | यस्तो त कसैलाई नपरोस ।। (भिडियो हेर्नुस्) भर्खर जन्मेको बच्चा बोकेर कोठा छाड्दै, बच्चा जन्मेपछि बाबुले संसार छाडे | यस्तो त कसैलाई नपरोस ।। (भिडियो हेर्नुस्) अन्तिममा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला, यो खबर पनि पढ्नुहोस् !!
साउन महिनाको दोस्रो सोमबार कुन-कुन राशिलाई शुभ रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! साउन महिनाको दोस्रो सोमबार कुन-कुन राशिलाई शुभ रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल:
सामाजिक काममा समय बित्नेछ साथै सामाजिक कार्यमा धन खर्च हुनसक्छ। सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ। सम्मानित व्यक्तिहरू सँग भेट हुनेछ। टाढा रहेका संतानको खबर प्राप्त हुनेछ । जीवन साथि मिल्ने योग बनेको छ ।
नयाँ कार्यको शुभारम्भ गर्न सक्नु हुनेछ । नोकरी पेशा गर्नेको लागि दिन शुभ रहेकोछ । आम्दानीको श्रोत बढ्ने छ । कममा पद बढ्ने छ । सरकारी लाभ मिल्नेछ । पारिवारिक जीवनमा सुख र शान्ति रहनेछ । उच्चअधिकारीले काममा प्रोत्साहान गर्नेछन् । दाम्पत्य जीवन शुमुधुर हुनेछ ।
समय प्रतिकुल रहनेछ । शरीरमा जोस जागर कम हुनाले सोचेको काम पुरा नहुन सक्छ। मानशिक तनाब बढ्नेछ । पार्टनरमा गरेको कममा सहयोगीको आभाव हुनसक्छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग वादविवाद हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धी सँग सचेत रहनुहोला ।
नकारात्मक बिचारको कारण मानषिक तनाब बढ्न सक्छ। खान पानमा बिषेस ध्यान दिनुहोला अन्यथा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । आफन्त सँग वादविवाद बढ्न सक्छ । खर्च बढ्नाले आर्थिक समस्या हुनसक्छ । नयाँ कार्यको शुभारम्भ नगर्नुहोला ।
दाम्पत्य जीवनमा सामान्य बिषयमा विवाद हुनसक्छ । पती पत्नीमा कसैको स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ । व्यापारमा धैर्यताको साथ काम गर्नु होला। सामाजिक कार्यमा मन जानेछ । धार्मिक कार्यमा सगभागी भइनेछ ।
हरेक काममा सहज महसुस हुनेछ। घारम शुख शान्ति छाउनेछ जसको कारण मन प्रशन्न हुनेछ। शुभकार्य हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । आर्थिक लाभ हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा सबैको सहयो मिल्नेछ । प्रतिस्पर्धी संगको कडा मेहनत पश्चात सफलता मिल्नेछ ।
बौद्धिकताको चर्चा बढ्नेछ । व्यर्थको वादविवादमा नपर्नु होला । पेट सम्बन्धि समस्याले सताउनेछ । सन्तान शुख मिल्नेछ । नयाँ कर्यको योजना बन्न सक्छ। लामो यात्राको लागि समय उचित रहेको छैन । आमा बाट शुभ समाचार मिल्नेछ ।
स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ । आफूभन्दा ठुला सँग वाविवाद बढ्न सक्छ । आमाको सवास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। आर्थीक नोक्सान हुनसक्छ। सार्वजनिक रुपमा मानहानी हुनसक्छ। अचल सम्पति तथा वाहन खरिदा बिक्रि नगर्नु होला । स्त्री वर्ग तथा पनि बाट सचेत रहनुहोला ।
आध्यात्मिक बिषयमा रुची बढ्ने छ । दिदि बहिनीको सहयोग मोल्ने छ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । मन शान्त तथा प्रशन्न रहनेछ। नयाँ कामको थालनीको लागि समय उचित रहनेछ । लामो यात्रा हुनसक्छ । भाग्य वृद्धि हुनेछ ।
आफ्नो बिलोको कारण समस्यामा पर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यमा समस्य आउन सक्छ। आफन्तसँग बेकारको विवाद हुनसक्छ । आर्थिक लेनदेन हुनेछ । पढाइमा मन लाग्ने छैन । व्यवसायमा मन्धि छाउनेछ ।
शारीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुनेछ । आथिक लाभा हुनेछ । आफन्त सँग मनपर्ने भोजन हुनेछ। आचानक लामो यात्राको योजन बन्न सक्छ । नकारात्मक बिचारबाट टाढा रहनाले लाभ हुनेछ ।
मन तथा दिमाखलाइ एकाग्रता गर्न सक्नु हुनुहुनेछ। धार्मिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । आफन्त सँग टाढाको यात्रा हुनेछ । बोलीको कारण समस्य हुनसक्छ । आर्थिक अभाव हुनेछ। भाइ भाहिनीको सहयोग मिल्नेछ। व्यापारमा वृद्धि छ ।
Previous Article अन्त:त बिनिताकी आमा काठमाण्डौमा लु केर बसेको खुलासा, रुदै बिनितालाई यस्तो सम्म भनिन ।। (भिडियो हेर्नुस्)
Next Article Breaking:>> मध्यरात काठमाण्डौमा बाढी आयो, बच्चा सहित बाढीमा डु बेकालाई यसरी निकालियो ।। (भिडियो हेर्नुस्)